Mubarak oo xabsi daa'in lagu xukumay - BBC Somali
Mubarak oo xabsi daa'in lagu xukumay
2 Juunyo 2012
Image caption Madaxwaynihii hore Masar Maxamed Xusni Mubarak
Waxaa go'aanka maxkamadda ku dhawaaqay xaakim Ahmed Refaat oo sheegay in maxkamaddu ay Maxamed Xusni al-Sayyid Mubarak, waxaa lagu xukumay xabsi daa'in eedihii loo haystay oo ah fududaynta dambiyo dil lagu gaystay.
Xaakimka Axmed Refaat, wuxuu sheegay in lagu waayay Mr Mubarak eedo musuqmaasuq la xiriiray balse wuxuu sheegay in dadka Masar intii uu xukumayay ay soo mareen sodon sano oo mugdi ah.
Isla maxkamadda, ayaa labada wiil ee uu dhalay madaxwaynaha hore, Gamal iyo Calaa Mubarak, waxay sheegtay in aan lagu helin dambiyada loo haystay ee musuqmaasuqa.
Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Xabibi Al-Cadli, ayaa isaguna xabsi daa'in lagu xukumay lugtii uu ku lahaa dhimashada dibadbaxayaasha, balse lix saraakiil hore oo ka tirsanaa taliska booliiska, ayaa lagu waayay dambiyo noocaas ah.
Waxaa gudaha maxkamadda laga arkayay muuqaallo rabshadaysan kadib markii xaakimka ku dhawaaqay xukunka.
Dadkii joogaya qaybta dadwaynuhu ee maxkamadda ayaa istaagay oo bilaabay in ay qayliyaan, waxaana dhacay is jii-jiid yar.
Dhinaca kale bannaanka maxkamadda, ayaa qoysaska dadkii ku dhintay xilligii kacdoonka waxay sheegeen in aysan wax kalsooni ah ku qabin maxkamadda.